Soo dejisan IObit Malware Fighter 8.2.0.685 – Vessoft
WindowsAmnigaSawireyaasha fayraskaIObit Malware Fighter
Bogga rasmiga ah: IObit Malware Fighter
IObit kharimibo dagaalka – aalad awood si loo ogaado khatarta maqan iyo saarto spyware ah xaasidnimo. IObit kharimibo dagaalka ku jira qaab difaac gaar ah, in bannaanka soo dhigaysa modules advertising, trojans, keyloggers, kolkaasaa dirxi galay iyo barnaamijyada, in page bedel ku bilowday in browser. Software wuxuu taageeraa technology ilaalinta daruurtii, oo kuu ogolaanaya in aad si aad u ilaaliso computer in waqtiga dhabta ah oo u saamaxaaya in ay si faahfaahsan u astaysto heerka ilaalinta. IObit kharimibo dagaalka ayaa module ammaanka ee liiska xawaaladaha, faylasha, browser iyo shabakad.
Baaritaanka hanjabaad qarsoon
Soo saarida ah furin iyo spyware
Isticmaalka of technology daruur u ilaalin-waqtiga dhabta ah
English, العربية, Français, Español...
Soo dejisan IObit Malware Fighter
Faallo ku saabsan IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter Xirfadaha la xiriira
HWMonitor – waa aalad lagu kormeero xaaladda qaybaha kombiyuutarka ee kala duwan. Software-ka ayaa awood u leh inuu soo bandhigo qiyaasta hadda jirta, ugu yar iyo qiimaha ugu yar ee korantada ee qaybaha kombiyuutarka.
CmapTools – aalad lagu abuuro jaantusyada qaab-dhismeedka iyo khariidadaha fikradda. Software-ka ayaa si wax ku ool ah ugu habboon waxbarashada, aruurinta macluumaadka iyo ka-fikirka maskaxda.